Vangani vanhu veDutch vangatokwanisa kubhadhara mabhiri avo panguva yeiyo corona dambudziko? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 21 May 2020	• 14 Comments
Kana iwe uchitevera nevezvenhau, hapanawo dambudziko muNetherlands kunze kweiyo corona hutachiona, iyo ichiri kugarira kunge bhomba renguva yekudaira. Ndekupi kushambadzira kana zvasvika pakuratidzira kutambudzika kwega kuseri kwemasuo epamberi evazhinji? Izvo hazvina kuoma kuongorora huwandu hweRIVM uye kuratidza mativi maviri. Nhau huru dzinochengetedza Rutte & Co mutemo. naJensen uyo anoti hazvina kunyanyoipa. Izvo chirongwa chenguva refu ndezvekuti kuchave neimwe rumutsiridzo mushure mezvo iyo yemapurisa nyika ichave yapedzwa uye zvese uye munhu wese anotsoropodza achaiswa pachena. Asi nei pasina munhu anoterera kune kunetseka kwemunhu uye yemari?
Mukuita, izvo zvese zvakanakisa zvakavimbiswa rutsigiro mapakeji zvichanyanya kuve mubvunzo wemakomendi, kwauchazotumirwa kubva kunopesana neA kusvika kupokana B. Kunyanya, iyo 433.000 freelancers ichava iyo spool, nekuti yavo TOZO rutsigiro kubva 1 June ichaongororwa kutarisana nemari yemudiwa uye ipapo ichangopfuura nekupfuura. Uye kunyangwe iwe ukagashira rutsigiro, vazhinji (kusanganisira vasina kuzvishandira) vanogona kuona kuti kuderera kwemari mutengo kunogona kukuvadza kubhadhara rendi. Hurumende inoona kuti dambudziko iri rakarembera, saka hurongwa hwaive hwekuisa renji yekukasira yekuzeya, asi zvakaramba zvakadaro Kajsa Ollongren torpedoed.
Izvi ndozvinoita mairi mune zvematongerwo enyika: mutsvuku mutsara wakagadzwa kare, asi iwe unoita vamwe nezve 'isu tiri izvo' kana 'tinopesana nazvo'. Ndiko kunyepa kwehutongi hwatinorarama pasi pawo. Ollongron anoti nzvimbo yekurenda ndeyemakambani emumba chete, nekuti vane mari shoma yekudyara mukuvakisa nyowani. "Dare remakurukota rinosisira kupa varidzi vemba mukana wekupa zvigadziriso zvetsika. Semuenzaniso, vanokwanisa kupa varimi mari yekubhadhara mari yekubhadhara, kudzima chikamu chemubhadharo kana kudzorera rendi, ”anodaro Kasja. Ollongren inodawo kuti zviite nyore kuita kwenguva pfupi kubhadhara renti. Bhiri nyowani rinopinda musimba gare gare rinoitawo izvi.
Mumwe mutemo. Mitemo iri kubhururuka ichitenderedza nzeve dzedu, asi mukuita izvozvo inoramba iripo kuti masangano emumba aderedze rendi. Uye ivo pamwe vanozoita izvo nekushingairira (kwete).
Ehe, matambudziko chaiwo aripo nevanhu vasingachakwanise kubhadhara zvakare uye vangave nemwedzi mumwe kana miviri kumashure. Hatizive nekuti hapana anoitsvagisisa. Iwe unoda kuchengeta kutambudzika munharaunda pasi pekapeti senyika. Kuderedzwa kwemubhadharo kwakanaka, asi iwe unoitei kupokana neasina chirevo chekuunganidza vamisiriri pamwe nevezvikwereti avo vanoisa wakakura uwandu pamusoro pemakadhi ekunyanyisa? Mari yemubhadharo wereji inogona kukurumidza kutungamira mazana emadhora mune imwe mari yekuwedzera, kuitira kuti iwe uchawira kunyange mberi kumashure kwemwedzi unotevera.
Ikozve kune maitiro ekutambudzika kumatambudziko, kwaunonamatira zvakanyanya mune zvemari, izvi zvinogona kutotungamira kutarisirwa kwevechidiki zvakare huya utore kana vana vako vasingakwanise kuiswa nemhuri yekurera, nekuti hausisiri vatorere.
Kana kudzikisira kwemari (nekuda kwemabhirioni emaoreji) kuchizoita nemitengo mumitengo mikuru uye kana munguva refu mutero ukawedzera, nekuti mapaketi ekubatsira anofanirwa kutorwa kumwe kunhu, kunyangwe vanhu vazhinji vachapinda mudambudziko.
Ehezve kune vamwe vanhu vari kuita nemazvo. Ava ndivo vanhu vanoshandira system uye vanoita zvese izvo zvekutarisa nekumanikidza mabasa. Iwe unogona kuwana basa rakakura seye RIVM yekuongorora, kwauchazotumirwa kunze mumugwagwa kunoedza vanhu corona kana kuona kana vanhu vanonamatira mita nehafu. Kune angangodaro kune yekudyidzana mafemu ari kusangana heyday, nekuti iwo anotungamira makambani uye anovayambira maitiro ekuronga kwavo kambani pane imwe chete nehafu yemamita nzanga. Vanhu vazhinji vanoshandira hurumende, hafu-hurumende kana makambani anopa mabasa ane chekuita nawo, vanhu vazhinji vachabatsirwa nekutonga nekuranga boka iro risati rashandira hurongwa.
Kusvika rinhi kusvikira maDutch aziva kuti ipapo hapana arikuuya kuzonunura? Kusvika riini vanhu vanoshanda sisitimu vazvitarise pachavo mugirazi vasina kana kunyara kukuru? Zvakanaka, chero iwe uri wehuwandu, iwe unogona kuhwina chikwereti chako chakabatana kuenda naMeiland pane kurwira nyika yakasununguka zvechokwadi. Vanhu vanozoziva riinhi kuti isu tinogara murunyararo rwechisarudzo, umo vezvematongerwo enyika kwemakore mazhinji vakatiperekedza nekunyepedzera kwesarudzo, asi muchivande vachitevera chirongwa chikuru chinofanira kubata vanhu vazhinji? Nzira imwechete yekubuda mune iyi mamiriro ndeyekuchinja kwechokwadi, umo vanhu vanotora masimba.
Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nehutongi hwakananga. Mukudzvanya kwakatwasuka, vafundisi vanosarudzwa zvakananga nevanhu vanozivisa vanhu. Vanosarudza neruzhinji kuti mitemo yakapasiswa here, mutemo mukuru ndowkuti hapana mutemo unofanirwa kukanganisa kana kubvisa kodzero dzakakosha mubumbiro. Naizvozvo, zvese zvinotyora kuvanzika uye pane muviri uye nhengo hazvigoni kupinda musimba semutemo (kunyangwe mutemo wekumanikidza wekudzivirira). Direct demokrasi inogona kuiswa nevanhu nekuregeredza incumbent zvematongerwo enyika uye kuvaka itsva system ivo pachavo. Mazana ezviuru anofanira kuratidza kuti vanoda kuita izvi. Ndokusaka tichifanira kupandukira uye kuratidza kuti tinoda shanduko. Iwe haugone kuwana shanduko yechokwadi nekungonyunyuta pamusoro pechose chinotadza; unozviita nekuita.
Naizvozvo, batsira kusunungura shanduko yechokwadi. Shingirirai mune demokrasi yakananga uye mugovane iyi webhusaiti uye chikumbiro chayo: www.dvd.nl
Source chinyorwa listings: bnr.nl, telegraaf.nl
Tags: corona dambudziko, coronavirus, Featured, zvemari, renji kumira, kuderedzwa kwemahara, zvinetso, hurumende, revolution, kutsigira, support packages, Tozo, kuzvipira, zzpers
21 May 2020 pa 10: 25
Iyo yazvino Facebook kuongororwa: iwe uchiri nevateveri, asi iwe haugone kutumira.
Zvinoratidzika kuti peji rangu reFacebook rapfuura: Ini handichakwanisi kutumira chero chinhu zvakare!
21 May 2020 pa 16: 48
Zviripachena kuti kwaive kutadza kwehunyanzvi kana ivo vakafuratira zvakadaro ..
21 May 2020 pa 12: 02
Iyo scamdemic inofanira uye inokurudzirwa nehurumende / kuchengetedza masevhisi.
Pakufumurwa kweavo Asingaone uye zvisina musoro matanho
Ivo havasi kumirira. Vanhuwo zvavo vanobvumidzwa
havazive chokwadi uye havafanire kufunga. Kodzero dzevanhu dzinotyorwa, asi ndiani anogaya pabasa rose rehurumende uye / kana vamwe vese vachinetsekana ne 'basa' ravo kana hupenyu hwavo hwekutambidzwa.
Sezvineiwo isu tinogara munyika 'yakasununguka'.
Vanhu vanosaina chikumbiro izvozvi!
21 May 2020 pa 12: 15
Izvo zvisingaonekwi zvakanyanya ndezvekuti nzira iyi yakanangana nekubatanidzwa kweNetherlands sepurovhinzi muEUSSR .. De facto, yatotarisirwa nePolitburo muBrussels, ichi chete chivharo cheCorona chinoona kuti zvidimbu zvepazamu zvekupedzisira zvinowira munzvimbo.
Iyo GDR yaive harbinger. kuyedza kuti chii chaizopfupikiswa pane nyika yeEuropean. Iwe unogona ikozvino zvakare kunyatsoona kuti ndiani anodzora chikamu chino chekushandura, sezvakataurwa naJFK, ndiwo muchina unobatanidza zvese uye unoshanda mu "Lock nhanho".
Stasi Merkel, Trilateral nhengo Vestager, Von der Leyen, uye Timmerfrans vakatarisa nemaziso uye vanobvuma. Chikamu chekunyorera cheNew Stasi (Eurogendfor) chinogona kutanga munguva pfupi iri kutevera.
21 May 2020 pa 15: 26
ndatenda Salmon! Kubvunzana kwakanaka kwazvo,
Mutungamiri France vaive neye rakakosha rekuongorora iro rakajeka.
YAKAITWA (maminiti 6; 19 Iyo haina Gulag haina iyo KGB "Yet")
Minute 4; 03 Maitiro eGigscard d'Estain akaziva
21 May 2020 pa 19: 52
unogamuchirwa Kamera! Aivawo Macron akasheedzera Eurogendfor kupesana neiyo yakatsanangurwa "yero vests" kufamba. Mushure mezvose, iri bvunzo-bvunzo-bvunzo ...
21 May 2020 pa 15: 53
ramangwana, kutarisa uye kushanduka (fff = 666)
Semuenzaniso, matanho akakosha atorwa mukubatana pakati peEUROGENDFOR neyevanhu CSDP mamishini, uye chirongwa chekutaurirana chakagadzirwa kuti chioneke kuratidzika kweEUROGENDakuti.
Gore rino, pfungwa dzakakosha dzeramangwana, kutarisa uye kushanduka kunoonekwa muzvirongwa zvatakazvisarudzira.
Chimwe chezvinangwa izvi, uye chakakosha, ndechekutsanangudza remangwana EUROGENDODA deployment zviitiko.
Izvi zvinoreva kuti tinofanirwa kutarisa kubatana kwenzvimbo uye kubatana nemapati ari kunze kweEUROGEND aman, sevashandi vehurumende uye vatungamiriri venzvimbo.
Kushanda pamwe kunotibvumira kudzidza kubva kune mumwe nemumwe.
Gore rino, Netherlands iri zvakare kutungamira International Association of Gendarmeries uye Mapurisa Echisimba neMauto Status (FIEP) uye European Union Mapurisa uye Civil Service Training Program (EUPCST).
Tichaongorora kuti tingaone here kubatana pakati pemasangano aya uye nekuongorora kuti tingatsigirana sei nenzira yakanakisa.
Nezve iyo nyaya pamwe kubatanidza neFONONTEX kunogonawo kusimbiswa.
Izvi zvikwata zvehunyanzvi zvinofanirwa kuve zvinoshandurwa uye zvakagadzirira kutumira nekukurumidza mumamiriro enhamo. Ivo vanofanirwa kusanganisira nehunyanzvi hunhu hunodiwa kune EUROGENDakuti remangwana rekuparadzanisa mamiriro.
Nenzira iyi isu tinogona kupindura kutyisidzira kwenyika uye matambudziko nenzira inobudirira.
Pachave nekuwedzerwa kwakawanda kwekuda kweizvi mune ramangwana.
Nhasi, pfungwa dzakakosha dzemberi, kutarisa uye kushanduka (fff = 666) dzakakosha kupfuura nakare kose.
22 May 2020 pa 12: 40
REPORT: EU Kuronga "Vaccination Pasipoti" Kubva 2018
"Roadmap on Vaccination" inoratidza makore matatu chirongwa chekusimudzira "vaccine chivimbo" uye kufambira mberi "zvemagetsi tracking"
21 May 2020 pa 12: 45
Kwemakore, mazhinji akaradzikwa kurara uye akabikwa mumasaini avo zvekuti ini ndanetseka nekufunga kuti mhinduro inoshanda ichawanikwa munguva yechinhu icho chave chichiitika kwemakumi emakore pamberi pavo chaipo.
Zvakanaka kutarisa nezvechizvarwa icho chichava chakaomesesa nenjodzi iyi. Zvinonzi chizvarwa Z, vadzidzi vane chikwereti vasina maonero.
21 May 2020 pa 13: 51
… Kusvikira vava pamusuwo wako wepamberi:
De Jonge: 'Yakamanikidzwa kugara mune imwe bvunzo nyowani isina kubviswa'
Kana idzo shanduko dzemutemo dzikasave pasina, hurumende inofunga.
21 May 2020 pa 14: 16
Palantir anotora mamwe maCOVID-19 zvibvumirano, ino nguva neVA
Apple uye Google inotangisa kuratidzira API yekuzivisa, ichigonesa zviremera zvehutano zveruzhinji kuburitsa maapp
22 May 2020 pa 00: 40
Aya matanho gumi aunofanirwa kushandisa, kana iwe uchida kushandura hutachiona husina huturu kuita gamba renyika remasimba
1. Kutanga nehutachiona husina kutsanangurwa, wedzera bvunzo zvisizvo, uye kurudzira vakawanda vanorwara zvakanyanya kana vanorwara zvakanyanya sezvinobvira kuti vadzokororwe kuongororwa kusvikira vaedzwa.
2. Taura kufa kwako kusingaite uye wonyatso kusaziva kuti vanhu ava vakafa neHIV here kana kuti NEMAHARA.
3. Gadzira 'kupindura' kune 'dambudziko' iro rinoburitsa network yakakura yehutongi matanho, mamwe acho anga achironga kwenguva yakareba, uye vashoma chete avo vane chero mukana wekushandisa kupwanya-kudzivirira. (Ita shuwa yekumisa sarudzo kusvika pakuzivisa zvekare uye nekuwedzera masimba emapurisa ekusunga pamwe nekutarisa)
4. Dzora zvipatara zvako kune vese asi 'covid kesi'. Kumisa kuvhiya kwakasarudzwa, itsvo dialysis, kurapwa kenza, zvakajairika GP kubvunzana uye "ese asiri ehutano". Nekudaro zvinowedzera zvisingazununguke zvese zvinokonzera kufa.
5. Chinja mitemo yako munzira dzakawanda kuti ubvumire kufa kwese uku kutsvagisa cheki yakajairika uye zviyero uye kuti zvionekwe nyore se 'covid-19 zvine hukama', kungave neyekuita zvisina kunaka bvunzo kana kungoitwa ne 'kliniki mharidzo'.
6. Kana zvingaitika kuti vamwe vanenge vachipinda midzimu vachizeza kuenda pamwe neizvi, shandura mutemo kuti ubvumire imwechete MD, angangodaro asina kumboona murwere ari mubvunzo, kuti aongorore covid19 nekufunga kwake.
7. Taura nhamba dzinovhundutsa dze 'nyaya nyowani' dzaunowana semhedzisiro yezvakasiyana izvi manhedzisiro, seuchapupu hwekuti matanho ehutongi hutsva akakosha sei 'pakuponesa hupenyu'.
8. Pasina pfungwa yekushungurudza sunga zvinosungirwa Rega Kuregedza (DNR) s kune chero huwandu hwevanhu iwe unofunga vanodya zvisina basa. (Kana zvichinge zvanetswa kutaura nezvekutambudzika kwevanhu, mashoma ezvehutano zvekuchengetedza zviwanikwa uye maairilators
9. Usakanganwa kuwedzera chero kufa kunotevera kune covid19 totals.
10. Ita shuwa vezvenhau vanosheedzera chero munhu anobvunza chero chikamu cheizvi 'rekurangana theorist'.
23 May 2020 pa 10: 41
Zvinosetsa kuti iwe unotaura martien meiland mune yako chinyorwa. Ndanga ndichinetseka kwechinguva kuti zita iri rakanyatsosarudzwa / zvakasikwa. Iyo ine kurira kwakafanana sezita rako. Zvingaende kusvika pari kuti izvi zvaitwa nechinangwa chekusabatanidza zita rako muvanhu kune asiriye zvakakomba hunhu Martien Meiland?
Kunyangwe crazier; meiland ine maviri akasiyana maziso maziso, iyo chimeric mhedzisiro pamufananidzo ...
23 May 2020 pa 16: 48
Iyo yezvemari coup d'etat yakatsanangura, fungidziro yemadummies:
« Iwe haugone kupinda muchitoro kana iwe ukasapa zita rako nehuwandu hwevaranda panzvimbo yekubatirana uye izvo zvinongova kutanga
Maurice de Hond anowana imwe nehafu yemamita kutonga nonsense (vhidhiyo) »
Kushanya kwakazara: 2.442.616